Caawinta Dadka Deggan waxay iska leeyihiin mustaqbalkooda
Marka Fairmont Estates, bulsho guri la soo saaray oo ku taal koonfurta Minnesota, si lama filaan ah ayaa suuqa loo dhigay ka dib 25 sano oo lahaansho ah maalgeliye ku-salaysan Wisconsin, dadka degan 94-ka beesha ayaa ogaa inay u baahan yihiin si dhaqsi ah haddii ay rabaan doorka mustaqbalka ururka. Sababtoo ah maalgeliyeyaal badan oo mustaqbalka ah isla markiiba soo bandhigeen dalabkooda, shaqaalaha Northcountry Cooperative Foundation waxay la kulmeen dadka deegaanka si ay ugala hadlaan doorashadooda.
Aasaaska Xirfadlaha Nourthcountry (NCF) waa urur aan faa'iido doon ahayn oo bixiya waxbarasho, gargaar farsamo, adeegyo, iyo barnaamijyo ururada iskaashiga. Waxay raadinayaan inay la shaqeeyaan dadka si ay u dhisaan ururo wada-shaqayn ah oo sii jiraya, oo u adeegaya jiilka ka dib dhalashada milkiilayaasha.
Laga soo bilaabo bisha soo socota, xubnaha bulshada ayaa la kulmay NCF si ay wax badan uga bartaan fursadaha ay u leeyihiin. Waxay tixgeliyeen suurtagalnimada in maalgaliye kale uu iibsan karo guriga, kor u kaca kirooyin badan oo ah heer aan la isku halleyn karin, ama ka xun - dhulku waa la horumarin karaa oo waxay u baahan doonaan inay u guuraan. Waxay jecel yihiin fikradda ah inay ku hadlaan sida ay bulshadoodu u socotay, kooxdu waxay si isku mid ah u isku raaceen in ay danta ugu wanaagsani tahay inay sahamiso lahaanshaha guryaha.
Kulankii ugu horreeyay ee xubinnimada, 25 ka mid ah 94 qoys ayaa ku biiray Cooperative iyo xubnayaashu waxay go'aansadeen inay magacooda naftooda ku magacawdaan Shan Shan Baabood ka dib shantii meelood ee maxaliga ah ee loo yaqaano aagga. Xubnaha waxay doorteen Guddi Ku-meel-gaadh ah oo ku-meel-gaadh ah kuwaas oo si mutadawacnimo ah u shaqeeya waqtigooda oo ay ku kulmeen toddobaadkiiba afar bilood si loo gaaro hadafkooda guud. Xubinnimadu waxay gaadhay 48 guri ama 52% qoysaska la degan yahay marka la iibsanayo.
Diisambar 30, 2014, Shirkadda Five Lakes Cooperative waxay iibsatay Fairmont Estates. Qiimaha horumarinta la xidhiidha macaamilka ganacsiga ayaa ku dhawaad $ 1.8 milyan.
Wadashaqeyntu waxay bilawday sannadkii ugu horeeyay ee milkiilaha dadka degan iyadoo la qabanayo olole tababar oo ay kafaala-qaadatay NCF, oo loogu talagalay inay dhisto xirfadaha hoggaanka Guddiga Shanaad ee Shirkadda Five Lakes Cawimo ee maamulka, maareynta maaliyadeed, u hoggaansanaanta sharciga iyo xeerarka.